दुर्घटनामा परी साउदी अरेबियामा वीरबहादुर रानाको ज्यान गयो – Setosurya
दुर्घटनामा परी साउदी अरेबियामा वीरबहादुर रानाको ज्यान गयो
सोमबार १६, असोज २०७४
कञ्चनपुर । दुर्घटनामा परी साउदी अरेबियामा काम गर्दै आएका कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ मघरघटैया मुक्त कमैया शिविरका ३५ वर्षीय वीरबहादुर रानाको मृत्यु भएको छ ।
साउदी अरेबियाको माहिल भन्ने स्थानमा सवारी दुर्घटनामा परी रानाको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो । राना एक वर्षअघि देखि साउदी अरेबियामा सवारी चालकका रुपमा काम गर्दै आएको नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष वाले रानाले बताए । “घरको कमाउने एक्लो व्यक्तिको मृत्यु भएपछि परिवार शोकमा डुबेको छ”, उनले भने ।
वीरबहादुरसँगै काम गर्दै आएका नेपालीले उनको घरमा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको जानकारी दिएको अध्यक्ष रानाले बताउनुभयो । मृतकको कमाईमा आमा, बुबा, श्रीमती, नाबालक छोरा र दुईजना छोरी आश्रित रहेका थिए । “मृतको शव स्वदेश ल्याउनका लागि पहल गरिरहेका छौँ”, अध्यक्ष रानाले भने ।
यो हो उत्तर कोरियाको गोप्य सहर, जहाँ तयार हुन्छन् विनाशक हतियार (फोटोफिचर)
नेपालमा एउटा मात्र कम्म्युनिस्ट पार्टी हुने, माओबादी लाइ एमालेमा मिलाउने अन्तिम तयारी
नवराज सिलवाल गृहमन्त्री बनेपछि को बन्ला त आईजीपी
गृहमन्त्री निधिले कुर्सी नपाएपछि कार्यक्रम नै बहिस्कार !
संविधान संशोधन विधेयक ल्याए संसद अवरुद्ध गर्ने विपक्षी ९ दलको निर्णय
ओलीले पुछिदिए प्रकाश पत्नी बिना मगरका आँशु, के गर्दैछिन् सिर्जना ?
सरकारको नुन पानी खाएका एसएसपी श्याम खत्रीको यस्तो हर्कत ! हेर्नुहोस् सुन तस्करसँग मिलेर के के गर्थे एसएसपी खत्रीले
संसद्का १४ दल नील, बहालवाला ३ मन्त्रीकै दलले वडाध्यक्ष समेत जितेनन् !
यस्तो छ बागलुङ कालिका भगवतीबारे रोचक किम्बदन्ती……..
अग्लो र लामा पुलमा इतिहाँस रच्दै पर्वत जिल्ला, पाँचौ अग्लो र लामो झोलुंगे पुलको निर्माण कार्य सुरु :
मूख्यमन्त्रीका लागि एमालेमा रडाको, कसले हत्याउने भन्नेमा एमाले नेताहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा
संशोधन प्रस्तावप्रति मोर्चा नरम
राष्ट्रपति लाइ भेटेर के के भने ओलीले ? हेर्नुहोस विस्तृतमा
जब प्रधानमन्त्री अोलीलार्इ भेट्न योगेश भट्टरार्इ मध्यरातमा पुगे !
पर्वतको सुदुर दक्षिण पुगेर पदम गिरिले भने – पाँच वर्ष भित्रमा कुश्मादेखि टकलाकसम्मको सडक कालोपत्रे गरेर छाड्छु !
मोदीले हाले, शुष्माले दिईन, देउवाले पिए
अब यी डाक्टर पर्ने भए लालबाबुको फन्दामा !
स्वीकृतिबिनै सञ्चार उपकरण आयात
नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने विषयमा देउवा र मोदीबिच यस्तो सहमति भएको खुलासा
जनकपुरको सडकमै बेहोस भए कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि
ओलीको पहिलो भ्रमणमा मोदीबीच चर्काचर्की……हेर्नुहोस
थापाको स्वस्थ्य अवस्था वुझन अस्पताल पुगेका उम्मेदवार भट्टराईमाथि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले गरे दुव्र्यवहार ?
५ दर्जन विधेयक अपलत्र, माघ ७ को ‘डेडलाइन’ भत्किने चेतावनी
ज्ञानेन्द्र शाह शीतल निवासमा
संसोधन पार लगाउने प्रचण्डका तीन विकल्प
भारत र जापानमा २५ हजार मतपेटिका खोज्दै निर्वाचन आयोग